बलात्कार प्रयासपछि किशोरीमाथि कुटपिट- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ १२, २०७९ कुम्भराज राई
ओखलढुंगा — मानेभन्ज्याङ–५ धिमीले गाउँकी १७ वर्षीया किशोरी गत बिहीबार बाटो नजिकै घाँस काट्दै थिइन् । एक अपरिचित युवक नजिक आए । चिनजान गरे । आफ्नो नाम रिदम राई बताए । फोन नम्बर साटासाट गरे । पछि फोनमा बोलचाल हुँदा भेट्ने प्रस्ताव राखे ।
शनिबार रात परेपछि युवक उनको घरनजिकै आए । किशोरी पनि अभिभावकलाई चाल नदिई निस्किइन् । गफ गर्ने क्रममा दुवै केही परसम्म पुगे । युवकले शारीरिक सम्बन्धको प्रस्ताव राखे । किशोरीले अस्वीकार गरिन् । त्यसपछि युवकले घाँटी थिचे, कुटपिट गरे । ढुंगाले टाउकोमा हिर्काए । कानको गहना थुते । मोबाइल खोसे, ब्याट्री, सिम निकालेर फाल्दिए । किशोरीको ज्यान गइसकेको अनुमान गरेपछि युवक घटनास्थलबाट भागे । अभियुक्तले प्रहरीसमक्ष दिएको यो बयानलाई आधार मान्ने हो भने घटना विवरण यत्ति हो ।
बिहानपख गाउँले र आफन्तले बलबहादुर राई ग्रामीण समावेशी सडकको जुकेखोलामा किशोरीलाई अचेत अवस्थामा भेटे । लुगा च्यातिएको थियो । तत्काल प्रहरीको सहायतामा उपचारका लागि ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पताल पुर्‍याइयो । अवस्था गम्भीर भएपछि उनलाई आइतबार हेलिकोप्टरबाट थप उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल काठमाडौं पठाइयो । आईसीयूमा उपचार भइरहेकी उनको टाउकोको शल्यक्रियाको तयारी भइरहेको काठमाडौंमै रहेका मानेभन्ज्याङ–५ का वडाध्यक्ष रामकुमार राईले बताए ।
किशोरीले ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पतालमा होस खुल्दा युवकको नाम रिदम राई बताएकी थिइन् । प्रहरीले मानेभन्ज्याङ र आसपासमा उक्त नामको कोही भेटेन । ती युवक सिन्धुलीको नेपालथोक पुगिसकेका थिए । उनी त्यहीं एक होटलमा काम गर्ने मानेभन्ज्याङ–९ माधवपुरका २७ वर्षीय टंकराज राई रहेको खुल्यो । खुर्कोट प्रहरीसँगको समन्वयमा आइतबारै उनलाई पक्राउ गरेर जिल्ला ल्याइयो । उनले प्रहरीसँगको बयानमा घटनामा आफ्नो संलग्नता स्विकारेका छन् । अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
‘युवकले म त भोलि सहर जाँदै छु आज जसरी नि भेटौं भनेकै आधारमा किशोरी घरबाट निस्केर भेट्न गएको खुलेको छ,’ डीएसपी सुकदेव खनालले भने, ‘बुबाआमाले छोरी घरबाट निस्किएको थाहा पाएका रहेनछन् ।’ टंकराजविरुद्ध किशोरीका परिवारले बलात्कार तथा ज्यान मार्ने प्रयास भएको भन्दै किटानी जाहेरी दिएका छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ ०६:४७
‘खेलाडी त राजा हुन्, म सेवकमात्र हुँ’
प्रशिक्षक अल्मुताइरीले विद्रोह गर्ने खेलाडीबारे कहिल्यै केही नबोल्ने वाचा गरे
जेष्ठ १२, २०७९ हिमेश
काठमाडौँ — एसिया कप छनोट तेस्रो चरणको तयारीलाई नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली बुधबार कतार गएको छ । यसैक्रममा नयाँ तथ्य बाहिर आएको छ, नेपालले कतार बसाइका क्रममा दुई अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ । त्यो टिमोर लिस्टे र ओमानविरुद्ध । यसअघि अफगानिस्तानविरुद्ध खेल्ने कार्यक्रम थियो । त्यो रद्द भइसकेको छ । अब नेपालले नयाँ प्रतिद्वन्द्वी पाएको छ । दुई साताको कतार बसाइपछि नेपाल कुवेत जानेछ ।
अबको एक महिनाभन्दा कम समयमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मा नयाँ कार्यसमितिका लागि निर्वाचन हुँदै छ । एन्फाले नै गठन गरेको प्रशिक्षक–खेलाडीबीचको विवाद छानबिन कमिटीले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । त्यसमा भनिएको छ, मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीलाई एसिया कप छनोटपछि हटाए हुन्छ । प्रतिवेदनमा अल्मुताइरीको यस्तो र उस्तो कमजोरी छ भनेर औंल्याइएको छ । विद्रोही खेलाडीका कमजोरीहरू पनि केलाइएको छ ।
यसबीच प्रशिक्षक स्वयं लामै समय चुपचाप जस्तै रहे । टिमको प्रशिक्षणमा भने लगातार खटिरहे । प्रतिवेदन आएकै दिन उनले कुवेत जाने टिमको घोषणा गरे । त्यसमा उनीसँग विवाद गर्ने १० खेलाडी त थिएनन् नै । यिनै खेलाडीको समर्थन गर्ने नियमित कप्तान तथा गोलरक्षक किरण लिम्बु पनि थिएनन् । यिनै प्रशिक्षक अल्मुताइरी टिमसँग कतार जानुअगाडि भने कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्न तयार भए ।
पहिलो प्रश्न थियो, के यो नेपाली मिडियासँग अन्तिम कुराकानी पक्कै हुने छैन ?
उनको जवाफ थियो, ‘भगवान्ले चाहेमा यस्तो हुने छैन ।’ कतार बसाइका क्रममा टिमले के कस्तो गर्ने योजना छ त ? उनले थपे, ‘कतारमा हामीले तीन मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछौं ।’ त्यसमध्ये दुई खेल त टिमोर लिस्टे र ओमानविरुद्ध भइहाल्यो । अर्को एक खेल को विरुद्ध हुनेछ, त्यो उनले खुलाउन चाहेनन् । यतिमात्र भने, ‘कतार बसाइ निकै छोटो छ, तर त्यहाँ बस्नेक्रममा खेलाडीको फिटनेस उच्च हुनेछ । टिममा के कस्ता समस्या हुनेछ त्यो थाहा हुनेछ ।’
प्रशिक्षक अल्मुताइरीले नेपाली टिम र आफ्नो लागि तत्कालका लागि एसिया कप छनोट मुख्य लक्ष्य नभएको बताए । बरू उनको नजर अबको विश्वकप छनोटतिर छ । उनले भने, ‘हाम्रा लागि एसिया कप छनोट निकै गाह्रो छ । जसरी सबै खेल एकै स्थानमा हुन लागेको छ, त्यसले हामीलाई गाह्रो बनाएको छ ।’ यी मैत्रीपूर्ण खेलबाहेक नेपालले कतारमा ६ दिनको कडा प्रशिक्षण पनि गर्नेछ । त्यसपछि नेपाली टिम कुवेत जानेछ । त्यहाँ सुरुआती दुई दिन प्रशिक्षणमै बिताउने छ ।
नेपालको पहिलो खेल जोर्डनविरुद्ध खेल्नेछ । त्यसपछि कुवेत र इन्डोनेसियाको पालो आउने छ । उनी यी तीनै टिम नेपालका लागि कडा प्रतिद्वन्द्वी हुने मान्छन् । इन्डोनेसियाविरुद्धको खेल पहिले भएको भए नेपाललाई केही राहत हुने अल्मुताइरीको तर्क छ । तर नेपालको पहिलो खेल नै उच्च वरीयताको टिमविरुद्ध हुनेछ । खेल समय पनि नेपालीका लागि कठिन हुन सक्नेछ । किनभने दुई खेल स्थानीय समयअनुसार राति १० बजे सुरु हुनेछ ।
त्यस समयको खेलका लागि टिमको व्यवस्थापन गर्नु निकै गाह्रो हुने मान्छन् उनी । कुवेतविरुद्धको खेल भने स्थानीय समयअनुसार सवा ७ बजेतिर हुनेछ । तर उनलाई के विश्वास छ भने कुवेतविरुद्धको खेल छाडेर अन्यमा स्थानीय दर्शकले समर्थन गर्ने भनेको नेपालकै लागि हो । यस छनोटमा नेपालको सम्भावनालाई लिएर उनको भनाइ छ, ‘हाम्रो फुटबल भर्खर जस्तो विस्तारै अगाडि बढ्दै छ । हामीले भर्खर केही सही पाइला चालेका छौं, त्यसैले छनोटमा हाम्रो प्रदर्शन सम्माजनक हुनुपर्छ, धेरै आस गर्नुहुन्न ।’
कुवेत जान लागेको टिमको सबैभन्दा ठूलो विशेषता हो, खेलाडीको औसत उमेर छ २१ वर्ष । यसलाई लिएर उनी खुबै उत्साही छन् र भन्छन्, ‘यो टिमले मज्जाले अबका ८–१० वर्ष खेल्न सक्छ । एसिया कप छनोटपछि हाम्रो ध्यान विश्वकप छनोटमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अबको विश्वकप छनोट हामीजस्तो तल्लो वरीयताका टिमका लागि निकै फाइदाजनक छ, किनभने यस छनोटमा बढी खेल र अवसर हुनेछ । यो हाम्रा लागि राम्रो छ ।’
साफ जित्ने लक्ष्य
अहिले तत्कालका लागि नेपाली फुटबलको लक्ष्य समृद्ध राष्ट्रिय टिम बनाउनुपर्ने मान्छन् प्रशिक्षक अल्मुताइरी । उनी खेलको नतिजालाई त्यसपछि मात्र स्थान दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘तर दक्षिण एसियाली स्तरमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो लक्ष्य जित र उपाधि नै हुनुपर्छ । मेरो लक्ष्य विश्वकप छनोटमात्र होइन, साफ च्याम्पियनसिप पनि छ । साफमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने हो भने हामीलाई तीन तत्व आवश्यक पर्नेछ । ती हुन्, खेलाडीको समूह यही हुनुपर्छ, कडा मिहिनेत जारी राख्नुपर्छ अनि हामीलाई भाग्यको केही साथ पनि चाहिन्छ ।’
उनी नेपाल एकपल्ट साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगेपछि त्यसमै मात्र सीमित हुन नहुने पनि मान्छन् । उनकै नेतृत्वमा एक वर्षअघि नेपालले माल्दिभ्समा भएको साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल यात्रा तय गरेको थियो । उनी भन्छन्, ‘अबको साफ च्याम्पियनसिपमा हाम्रो लक्ष्य भनेको कम्तीमा फाइनल पुग्नुपर्छ । हामीसँग अब एक फाइनल खेलेको अनुभव त भइसक्यो, त्यसैले अब उपाधिका लागि खेल्नुपर्छ । मलाई विश्वास छ, अर्को संस्करणमा पनि हामी फाइनल पुग्नेछौं । त्यतिबेला हाम्रो लक्ष्य जितमात्र हुनुपर्छ ।’
खेलाडीको सेवक हो प्रशिक्षक
यसका लागि उनी समग्र नेपाली फुटबलले नै कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने मान्छन् । मिहिनेतसँगै अनुशासन पनि । उनी भन्छन्, ‘विना अनुशासन फुटबलमा केही पनि हुन्न । नियम सबैमा लागू हुन्छ, खेलाडी र प्रशिक्षक दुवैमा । म के भन्छु भने भविष्यमा जो कोही पनि नेपाली राष्ट्रिय टिममा पर्न सक्छ । उनको नाम के हो र उनले के कस्तो खेलेको छ, त्यसबारे पछि मात्र सोचिने छ । मेरो एकमात्र प्रश्न हुनेछ, के ती खेलाडी अनुशासनमा बस्ने छन् र नियम पालना गर्नेछन् ?’
अझ उनी के पनि भन्छन् भने यो नियम उनको आफ्नो हुने छैन । बरू, फिफा र एएफसीले तयार पारेको आचारसंहिताअनुसार हुनेछ । भन्छन्, ‘धेरैले भन्न थालेका छन् म तानाशाही छ, हिटलर हो, सद्दाम हो भनेर । तर सबैले नियम पालना गर्ने हो भने केही पनि समस्या हुने गर्दैन । अहिले जे जति विवाद भइरहेका छन्, त्यसले स्थिति वास्तवमै खराब गरेको छ, तर मेरो आफ्नै लागि भने राम्रो भएको छ । अब विश्वकप छनोटमा कस्तो टिम हुनुपर्छ भनेर मलाई स्पष्ट चित्र अगाडि आएको छ ।’
उनले आफूलाई हुनसक्ने बर्खास्तगीको निर्णयप्रति पनि प्रस्ट धारणा राखे । उनले भने, ‘यसबारे मेरो स्पष्ट धारणा छ, मेरो अनुबन्ध सन् २०२४ को डिसेम्बरमा सकिन्छ । यदि एन्फाले मलाई बर्खास्त गर्छ भने त्यस निर्णयको म सम्मान गर्नेछु र घर फर्केनेछु । होइन, मलाई राख्न चाहनुहुन्छ भने म अझ बढी मिहिनेतले काम गर्नेछु । मसँग केही कसैप्रति खराव धारणा छैन् । कोही कसैसँग मेरो समस्या छैन । कोही खेलाडीसँग पनि समस्या छैन । अझ भनौं, कोही नेपालीसँग पनि मेरो समस्या छैन ।×’
अल्मुताइरीले अब आफ्नो ध्यान काममा मात्र सीमित हुने सुनाए । उनले थपे, ‘म के भन्छु भने नेपाली राष्ट्रिय टिमका प्रत्येक सदस्य राजा हुन् भने म तिनको सेवक हुँ । मेरो काम नै खेलाडीको सेवा गर्ने हो । म मात्र के हो र, पूरा विश्वकै प्रशिक्षकको काम यही हो ।’ उनी के मान्छन् भने प्रशिक्षकले काम गर्दा केही राम्रो हुन्छ, केही नराम्रो हुन्छ । सबै राम्रो र सबै नराम्रो भन्ने हुन्न । उनले थपे, ‘नेपाली प्रशिक्षक भएर मैले पनि केही भुल गरेको छु, विशेषतः भारतविरुद्धको साफ च्याम्पियनसिपको खेलमा ।’
त्यस्तै साफ च्याम्पियनसिपपछि फेरि नेपाल फर्कनु केही हदसम्म गलत भएको मान्छन् उनी । उनी के भन्छन् भने उनलाई विश्वास थियो, नेपाली फुटबलमा राम्रो हुनेछ । भन्छन्, ‘मसँग नेपाली फुटबललाई लिएर तीन वर्षको योजना थियो । मलाई लाग्छ, फुटबलमा मात्र होइन, समग्र नेपाली समाजमै परिवर्तन आइरहेको छ । मन परे पनि मन नपरे पनि परिवर्तन भइरहेको छ । चुनावबाट काठमाडौंमा बालेन्द्र साहको उदय पनि परिवर्तन हो । यो युवाले समाजमा ल्याएको परिवर्तन हो ।’
विद्रोही खेलाडीबारे नबोल्ने
प्रशिक्षक अल्मुताइरीले आफूविरुद्ध विद्रोह गर्ने खेलाडीबारे कहिल्यै केही नबोल्ने वाचा गरे । उनले भने, ‘यस विषयमा मैले केही र कहिले पनि बोल्ने छैन । म यति भन्छु, कसैलाई पनि त्यसै आरोप लगाउनुहुन्न ।’ उनी के मान्छन् भने यी विद्रोही खेलाडीविना नेपाल एसिया कपमा छनोट हुन्छ भने ती सबै खराब भन्ने हुन्न । अथवा नेपाल एसिया कपमा छनोट हुन्न भने अहिलेका खेलाडी खराब भन्ने पनि हुन्न । एउटै तथ्य भनेको सबैले नियम मान्नुपर्छ, अनुशासनमा बस्नुपर्छ ।
अल्मुताइरी भन्छन्, ‘म सबैको राम्रो होस् भन्ने चाहन्छु । सबै नेपाली खेलाडीको पनि । तर जतिबेलासम्म म नेपाली टिमको प्रशिक्षक रहने छु, खेलाडी छनोट गर्ने काम मेरोमात्र हो । कोही कसैलाई नेपाली टिममा पर्नु छ भने एउटै काम मात्र गर्नुपर्छ, लिगमा राम्रो खेल्ने । जसले लिगमा राम्रो खेल्छन्, त्यही राष्ट्रिय टिममा पर्नेछ । जसले राम्रो खेल्दैनन्, उनीहरू राष्ट्रिय टिममा पर्ने छैनन् । खेलाडीको नाम, उमेर, उनको क्लबबारे मलाई केही मतलब हुने छैन ।’
सेप्टेम्बरतिर एनएसएल भयो भने प्रशिक्षक अल्मुताइरी नेपालमै केही अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलाउने योजनामा छन् । उनी एसियाकै राम्रो टिम नेपाल ल्याउन सक्ने दाबी गर्छन् । यदि एनएसएल भएन भने नेपालले विदेशमा खेल्ने बताउँछन् । सायद युरोपमा । हामी फिलिपिन्स र लाओसविरुद्ध पनि खेल्न सक्छौं भन्छन् उनी । तर यो सबै योजना सफल पार्न एन्फाको निर्णय अन्तिम हुनेछ । उनी भन्छन्, ‘एन्फा चाहन्छ भने म फर्कने छु, होइन भने पनि ठीक छ ।’
एसिया कपपछि स्वास्थ्यमा ध्यान
अहिलेको एसिया कप छनोटपछि प्रशिक्षक अल्मुताइरीले तत्कालका लागि आफ्नो ध्यान आफ्नै स्वास्थ्य स्थितिप्रति हुने बताए । उनले शल्यक्रियाको सम्भावना रहेको बताए । उनले भने, ‘मैले केही लुकाएको छैन । सुरुदेखि भनेको छु, मुटुमा मलाई समस्या छ । थाइल्यान्डविरुद्धको खेलअघि म शल्यक्रियाबाट गुज्रिएको थिएँ । तर यो कसैलाई भनिनँ, किनभने यो व्यक्तिगत कुरा थियो । त्यसैले थाइल्यान्डविरुद्धको खेलका बेला म उभिन सक्ने स्थितिमा पनि थिइनँ ।’
उनले थपे, ‘तर अहिले सबैले मेरो स्वास्थ्य स्थितिबारे कुरा गरिरहेका छन् । तर मैले भन्नैपर्छ, नेपाली फुटबललाई लिएर मेरो धेरै जिम्मेवारी छ । मैले आफ्नो स्वास्थ्य स्थितिभन्दा नेपाली फुटबललाई प्राथमिकतामा राखें । नेपाल र नेपालीप्रति मेरो माया अगाध छ । अझै भन्छु, नेपाली फुटबलमा सबैले आ–आफ्नो काममात्र गर्ने हो भने केही समस्या हुने छैन । मलाई अझै नेपाली फुटबलका लागि धेरै गर्नु छ । एकले अर्कोलाई आरोप मात्र लगाउँदैमा केही हुन्न ।’
घाइते बालिकाको मृत्यु